Dissenter, browser reGab iro rinovavarira kurwisa kudzivirira | Linux Vakapindwa muropa
Kutaura chokwadi, ndanga ndichifunga kwekanguva kuti ndoburitsa ino kana kwete. Asi nei chichava chinhu chakaipa? Izvo zvagara zvichitaurwa: painternet tinogona kuwana zvakanakisa uye zvakaipisisa, kubva kune ruzivo rwunoponesa hupenyu hwedu kune zvisiri pamutemo zvemukati mezvakaipa zvatinga fungidzira, asi isu hatigone kuramba kuti zvakawanda zvinogona kuongororwa, uye pakati pazvo maonero uye ruzivo rweVazhinji vanhu. Nechikonzero ichocho akazvarwa Kupokana, uye pano isu tichataura zvishoma nezvake.
Chii chinonzi kupokana? Kuti tinzwisise, isu tinofanirwa kutarisa kumashure munguva, uye nekutevera nemoyo wese, ndinofanira kutaura kuti ndakazviita nekutarisa ichi chinyorwa kuti ini ndichaedza kupfupisa zvishoma. Kupokana yakatanga sekuwedzera yemabhurawuza, akadai seFirefox uye Chrome. Dudziro iyi "dissident", uye kuramba, sekureva kweRAE, ndiko "kupatsanura kubva padzidziso, kutenda kana mufambiro." Pakutanga, kuwedzerwa kwakashandiswa kutaura pane chero zvemukati, kunyangwe zvichipa sarudzo kana kwete, uye izvo zvinogona kuve dambudziko kana vashandisi vanga vari zvishoma, toti, zvakakomba.
1 Mushure mekubviswa kwerudzi kuwedzera iyo Dissenter browser
2 Tekinoroji hombe inoda kutonga kwese. Ndiyo chete sarudzo yakanakisa?
3 Uye chii icho browser chairo chinopa
4 Maitiro ekuisa Dissenter
Mushure mekubviswa kwerudzi kuwedzera iyo Dissenter browser
Gab isocial network yakanyanya kufanana neTwitter. Panzvimbo peTweets, tinogovana maToots, yekutanga ruzha runogadzirwa neshiri (peep), rwechipiri runogadzira nzou. Yake uzivi ndeyekuti hapana chekudzivirira, uye isu tese tinogona kufungidzira zvakanaka nezvakaipa izvo izvi, asi ndiyo nzira zvazviri uye ndicho chikonzero chayo chekuve. Makore mashoma apfuura, vese Google, Apple uye imwe huru tekinoroji yakavasiya "vakarembera", saka vaitofanira kusimuka vowana avo maseva.
Nechidzidzo chakanyatsodzidziswa, uye nekuwedzeredzwa kubviswa muzvitoro, varidzi veGab vakasarudza kuvhura yavo bhurawuza, uye iri zvakare raive dambudziko. Inochinja izvo yakavakirwa paBrave, mumitemo yayo yekuvanzika uye kuyedza kudimbura tekinoroji hombe, asi CEO weBrave haana kusekeswa kuti bhurawuza rakagadzirwa kubva kwaari, achiti "Dissenter ingori yekuwedzera." Asi Brendan Eich haakwanise kuita chero chinhu nezvazvo, sezvo bhurawuza rake rinoshandisa rakavhurika sosi uye zvakare rakavhurika sosi.
Tekinoroji hombe inoda kutonga kwese. Ndiyo chete sarudzo yakanakisa?
Chimwe chokwadi chiri kushamisika: ese matambudziko eGab anouya kubva pakurwisa. Pazasi mutsara, Gab yakabatana neFBIAsi havana kuvaraidzwa kuti gandanga raishandisa chikuva chavo kuronga. Pfungwa yega uye isingachinjiki: hazvisi nani here kuti paine pasingafungidzirwe pasocial network iyo inoshanda pamwe neFBI kupfuura mamwe akaongororwa ayo asingazivikanwe uye nekudaro asingakwanise kudzorwa? Nekuti izvo zvakaburitswa muGab zviri zveruzhinji, saka, ndinofunga, dambudziko harisi hugandanga, asi kutonga nekudzora. Ndiwo maonero angu. Kune avo vari kufunga "nevakavanzika?" Eya, kutaura kuti ivo havarwise Signal, semuenzaniso, sezvavanorwisa Gab, nechikonzero. Kutya kuti rumwe ruzivo rwuchaburitswa pachena? Handizivi.
Neichi chikonzero, varidzi vayo vakasarudza kusangoshandisa chete maseva avo, asi zvakare gadzira yako webhurawuza uye mamwe masevhisi senge Gab tv, rudzi rweYouTube umo, mukufungidzira, pasina chekudzivirira, ini ndinoomerera, nezvakanaka nezvakaipa izvo izvi zvingave nazvo.
Uye chii icho browser chairo chinopa
Sezvatakambotaura, Dissenter rudzi rweShinga, ine ad blocker, kudzora kuki, kudhinda kweminwe uye, tsime, kune zvese zvinhu zviri zveShingi. Iyo zvakare ine iyo yekuwedzera yakaiswa nekumisikidza, saka ini ndaizopfupikisa ndichiti Dissenter Browser ibhurawuza rakavakirwa paChromium, kunyanya, uye yakawanda, paBrave, pamwe nekuwedzeredzwa kwekutaura chero chinhu chisingashandisike uye chakagadzirwa kuti chive nechokwadi chekuti hapana anoisa kurova pavhiri, kwete izvozvi kana mune ramangwana.
Izvo zvakakwana here kushandisa bhurawuza? Ini handichaendi imomo, asi pakupedzisira ndakafunga kunyora chinyorwa ichi nekuti kunyangwe Mozilla atumira chirevo chinonyatso kuvimbisa kuti matanho akaomarara anofanirwa kutorwa, saka hatigone kuva nechokwadi chezana kubva muzana kubva pane imwe nguva kuenda pane inotevera vanoedza kutora nhanho yatisingade.
Maitiro ekuisa Dissenter
Kupokana ndiko inowanikwa yeLinux, macOS uye Windows kubva webhusaiti yako yekurodha. Vashandisi veLinux vanowanikwa muRPM uye DEB mapakeji, uye isu tinogona zvakare kuwana kodhi yayo kubva kuGitHub. Kana iwe uri kushandisa Arch Linux based operating system, iri muAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Dissenter, browser reGab rinobva paBrave iro rinovavarira kurwisa kudzivirira
Iyo gakava rinonakidza iro rerusununguko rwekutaura pamasocial network. Inofanira kudzorwa here? Ndiani anoidzora? Ndiye muridzi wesocial network ndiye anosarudza?
Kunze kwekukakavara, "asiri-epamusorosoro" masocial network anopedzisira ave nzvimbo yemusangano kune avo vasingawani nzvimbo yavo mune anozivikanwa kwazvo. Kubva pane zvandiri kuona, Gab ndiye anowana kutariswa kwevanyengeri vakasununguka vanogunun'una nezvekushomeka kwekutaura kwekusununguka. Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika naMastodon makore akati wandei apfuura, ayo akapedzisira ave musha kune vazhinji vashoma (nevashandisi vanobva kuIndia). Zvakare, vanhu vazhinji vakaenda kuTeregiramu kubva kuWhatsApp nekuda kwekuvharwa kwemapoka akati wandei kana chiteshi (ini handirangariri zvakanaka). Tichafanirwa kuona ramangwana reaya maratidziro mumakore mashoma.
Nezvechinyorwa, ndakachiwana chiri chikuru. Ini ndinofunga zvinoita kuti Pablinux kuvhiringidzika kujeke pamusoro peizvi zvese (chinhu chimwe chakaitika kwandiri).
Pindura kuna Komuredhi
Iwe unoona kuti havazi vese vanofunga zvakafanana. Ini ndanga ndatofunga nezvekusabvumidza makomendi, asi iyo ingangove irumwe rudzi rwekudzivirira, kunyangwe ndaiziva kuti chimwe chinhu chakadai chingaitika uye pamwe chichaitika kana zvikabuda paruoko. Ive nekuchenjerera, ini ndinonyora nezve bhurawuza, imwezve sarudzo, kudzivirira kuvharidzira uye nekutaura pane zvakashata ini neblog iri. Nekudaro, hapana munhu akatsoropodza Tor nekuita Onion kuti iwanikwe kwatiri uye uko iyo Deep Web inowanikwa, kwatinogona kuwana, pamwe, kunyangwe kurekodha kuuraya.
Ini handigoni kubatsira asi kushamisika kunze.
Ini ndinosiya mubvunzo ipapo: Nei Tor yakanaka uye Kuramba kwakaipa?
Tor yakaomarara, iwe unofanirwa kurodha pasi browser rako, uye uwane iyo .onisi kero, hapana injini dzekutsvaga senge google, inoenda inononoka ... Huya, haina hushamwari, uye "vanhu" havaridzire kuti vaone zvinhu zvezuva nezuva.
Zvino, kuva nechimwe chinhu senge Twitter kana Chrome inowanikwa, uko chero munhu anogona kuzviratidza akasununguka, izvo zvinosvika kune wese munhu.
Rega vanhu vafunge kuti ndezvekunyepera kana kuti hazvisi zvekunyepedzera, ndezve sexist kana kwete sexist, kuti ine rusarura kana kwete rusaruro, kuti zvinosetsa kana kuti hazvisi zvekuseka ... edu maitiro?
Zvichava zvakaoma, asi zvakaipa zvatingawana ipapo zvakanyanya kuipa, uye hapana anozvishora.
Ndinofunga kuti handina kuzviratidza zvakajeka zvakakwana. Ini ndanga ndisiri kuti Dissenter yakaipa kana yakanaka, pakupedzisira, senge zvimwe zvese, zvinoenderana nezvayakashandiswa. Uye zvakafanana nemafungiro angu aTor uye chero humwe hunyanzvi. Ini ndaisaziva kuti kuti nditaure "zvakaipa" zveDissenter (handifunge kuti ndakaita), ndaizofanira kushoropodza chimwe chinhu futi. Asi ini ndinogona kunzwisisa kusagadzikana kwako nekutarisa pane ese akataurwa.
Chandaida kusimbisa ndechekuti, pakupedzisira, iwo maonero ese akasarudzika kubva kunetiweki dzakawanda ari kutsvaga pekugara. Chokwadi ichi pachacho chinoratidzika sechine njodzi kwandiri, nekuti pakupedzisira tinopedzisira tangonzwa chete pfungwa dzatinoda, uye kwete idzo dzinoita kuti tinzwe kusagadzikana. Isu tinoita kuti network yedu iwedzere "kutakurika."
Nezve iko kunyorera, handifunge kuti haisi fu kana fa. Pakupera kwezuva iri browser + chiwedzerwa chavakabvisa muzvitoro. Kana ivo vachida kuishandisa, zvakanaka, asi zvirinani zvinotarisana nevashandisi vemasocial network. Zvinoita sekunge Facebook kana Twitter vakaita zvakafanana: Tora forogo yebrowser kuti iuye nekumisikidza ne plugin inonongedza kune avo network. Ini handifunge kuti ndeyevashandisi vese, chete kune vashandisi vemasocial network.
Ndizvo zvese zvandaida kutaura.
Zvinotyisa kuti iwe hautaure kuti ruzhinji rwevashandisi veGAB vachena supremacists. Iwe uri unonyadzisa blog.
Pindura kune antifa
Iwe wakakanganwa kutaura kuti urikutaura nezve mafomu akagadzirwa nevanhu vakanyanyisa kurudyi mapapiro kuitira kumisikidza ruvengo rwavo pasina kuvharirwa. Uye kuti ivo vakazvarwa nekuti vakadzingwa kubva munzvimbo dzakagadzirwa nevanhu kubva kune vanononoka (kwete emarudzi mazhinji), vanhu vaishushikana nezvefascism, chimwe chinhu icho nhasi chine zvinyorwa zviviri zvawakaratidza kuti hausi iwe.
Chinyorwa chimwe chete, kwete zviviri. Uye ndiyo maonero ako.
Iwe unoziva here pfungwa yeavo vakagadzira zvese zvigadzirwa zvaunoshandisa?
Unobvunza mutyairi webhazi wandinovhotera here kana chiremba anovhiya anozokuvhiya kuti mafungiro ake ndeapi nezvematongerwo enyika eChina muTibet?
Vanhu vanozviziva nezvekushayikwa kwavo kwetekinoroji, dzidzo uye hupfumi (kunyangwe kunaka) kusimudzira zvichienzaniswa nevamwe, kazhinji vane zvikonzero zvechibereko pazviri. Asi ndiyo nzira yakasarudzika sarudzo. Biology chinhu chimwe, shamwari yangu, uye ideology ndechimwewo. Vamwe vakagadzira mhasuru yekumhanya nekuvhima, uye vamwe vakaita grey, kuverenga mhepo uye kusagadzikana kwezvinhu, kugadzira zvivakwa nemishini, kuvaka matumba akasimba, kufamba mugungwa, kutungamira mvura, kugadzira michina, kuyedza mishonga zvichibva paruzivo. , kurima kana kusimudza chikafu pachinzvimbo chekuzviunganidza nekuchivhima nekuchinjanisa nemamiriro ekunze anotonhora zvakanyanya, izvo zvaida huchenjeri hwakawanda kuti hurarame kupfuura munzvimbo dzinodziya. Biology uye shanduko hazviite iyo greyhound uye muganho collie zvakafanana. Vanhu havazi vasingazivikanwe nemitemo iyi.
Pindura kuna Anne
Zvinosuruvarisa kuti chinyorwa hachitaure chero nguva chaiyo mabviro eGab uye mashandisiro ainoita kurongedza nekuparadzira meseji yekurudyi (chinokodzera icho dzimwe nguva chinopotsa pane chainofamba). Wanga uchida kusimudzira network yekusimudzira mhirizhonga? Nekuti pane nzira dzakawanda dzekudzivirira rusununguko pamhepo pasina kuzviita nemaNazi-maNazi, vachena supremacists uye imwe tsvina. Sekutaura kuri kumwe kutaura, vakagadzira yavo netiweki mukati meinokanganisa nekuti zvishoma nezvishoma ivo vakadzingwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzemahara, asi havana kubvumira rusarura, xenophobia, kusimudzira mhirizhonga, nezvimwe. Huya, nharaunda dzakasununguka dzefediverso dzaivakanda kunze zvakasununguka kudzivirira kusagadzikana uye kushaya rusununguko. Ichi ndicho chirevo chakakurumbira chokusashivirira. Ko kusimudzira uye kudzivirira kwekusa shivirira kunoregererwa here?
Ini ndinofungidzira kuti kutaura kwangu nezuro kuchave "zvine mwero", nekuti ini handizvione zvichishambadzwa. Kubasa kukuru kurusununguko rwekutaura, chero bedzi zvisinganetse mupepeti, hongu.
Mupepeti haana kuibata. Mhinduro yako inonyatso kuoneka, ingotariswa. Yakatumirwa muna Ndira 10 pa 23:53. Usauye nenhema, izvo zvainge zvisipo.
Kana nezuro manheru kana mangwanani ano anga asiri kuoneka pane ino webhusaiti. Ndinoonga kuti vakapedzisira vaburitswa, asi yakanga isiri panguva iyoyo. Kana chiri chinhu chekuzvidira kana kuti yaive mhosho, izvo handichakwanise kuziva. Chandinogona kutaura ndechekuti ndinoonekana neblog risingakwanise kuona zvikanganiso zvaro uye rinovanza ruzivo rwakakodzera kubva kuvaverengi varo mumuviri wenhau.
Na Mwari uye vanhu vanorwara nepfungwa iwe unotarisa pane meseji yawakaisa uye haina kuburitswa kwemaminetsi mashoma. Aya masocial network ari kugadzira zvizvarwa zvitsva zvevanhu.
Izvo hazvisi nezve ideology yeaani akaita application. Izvo ndezvekuti ipfungwa ipi iyi tekinoroji iri kuzoshandiswa. Vanonyunyuta vakaita genete saAnders Behring Breivik, vanoshandisa masocial network zvakanyanya kuendesa meseji yavo inosemesa, kunyangwe kutepfenyura kuuraya kwavo vazhinji kunorarama sezvakaita Brenton Tarrant. Sezvo masocial network ari kuzvinyora, ivo vari kugadzira aya mapuratifomu ekushandisa uku. Ngatitii zvishandiso zveruvengo, hukuru, rusaruraganda uye ruvengo.
Saka hongu, chikamu chakakosha cheruzivo.
Kana vananyengeri vakagadzira kunyorera kwavanogona kugovera shit yavo uye ndiani achashambadza chishandiso chakadai, ndingadai ndakatsamwa.
Zvinosuruvarisa kuti zvinongouya zve64Bit paWindows. Ndingadai ndakada kuzviedza, asi ini ndinemachina chete ane 32Bit.
»Kutaura chokwadi, ndave nenguva ndichifunga kuti ndoburitsa chinyorwa ichi kana kwete."
Chete nekutanga ikoko, uye nenyaya yekufanirwa kubvunza uyu mubvunzo, kwandiri, kutotaridza kushaikwa kuri pachena kweRUSununguko, kumanikidzwa kwe »Mainstream ', kutya kubuda munzvimbo dzakatenderwa dzebhodhi, uye kudiwa ye nzira 'Dzimwe nzira' dzeDissident.
Mutungamiri anotsiurwa nekuda kwekuve 'anonyanyisa' kupokana ne'Kusimbiswa ', iye chete asina kutanga chero hondo mumakore makumi mashanu. Asi panguva imwecheteyo, RRSS profiles yeVadzvinyiriri vanouraya Vanhu vavo vanoramba vakavhurika. Inopa zvakakwana kufunga (iwe pachako)
Kana iwe ukasabvumirana nepfungwa kana maonero, chero zvakadaro, usaverenge, kana iwe unogona kuedza kufunga nekupokana / kuramba nenharo kwete nemhedzisiro yekunyepedzera, AdDominem kana vamwe, nezvimwe.
Pedyo uye padyo nenyika nyowani, pamwe inotosviba.
Kugamuchirwa kuDystopia. Orwell-1984
Kana Genius wechokwadi (Mutungamiri) achionekwa munyika, iwe uchamuziva nechiratidzo ichi: vese mapenzi anomumukira. (Zvirongwa zveMapenzi-John Kennedy Toole)
Nezve chekutanga, chinhu chega chandingakuudza ndechekuti ini ndiri mupepeti weblog, kwete muridzi. Tarisa uone zvakataurwa: kurwiswa pandiri uye pa blog. Ini ndaiziva zvaigona kuitika ndosaka ndakafunga nezvazvo. Dai zviito zvangu zvaisakwanisa kukuvadza vamwe, ndingadai ndisina kuzeza. Nezve kushayikwa kwerusununguko, ndinobvumirana.
'Kutaura chokwadi, ndanga ndichifunga kwekanguva kuti ndoburitsa ino kana kuti kwete.'
Chete nekutanga ikoko, uye nenyaya yekufanirwa kubvunza uyu mubvunzo, kwandiri, unoto ratidza kushomeka kuri pachena kweRUSununguko, kumanikidzwa kwe 'Mainstream', kutya kubuda munzvimbo dzakatenderwa dzebhodhi, uye kudiwa kwenzira 'Dzimwe nzira' dzeDissident.
Yakanaka chinyorwa, iro rinotsanangudza uye rinoratidzira basa rehunyanzvi. Ndatenda.
Mhoro, chinyorwa chakanaka!
Inogona here Kuisa pasi pa Android?
Aiwa Zviripachena pane chete kune desktop